Hupfumi Mhepo Inodzora yeMabhazi, Murairidzi, Chikoro Bhazi uye Yakataurwa Bhazi fekitori uye vagadziri SONGZ
SZQ dzakateedzana rudzi rwekupatsanura denga repamusoro peyuniti yemhepo inodzora ye8.5m kusvika 12.9m kubva kuhupfumi yakajairwa bhazi, murairidzi, bhazi rechikoro kana bhazi rakataurwa Iyo yakateedzana ine yakanyanya tembiricha vhezheni inowanikwa. Iko kutonhora kugona kweakateedzana bhazi air conditioner anotangira kubva 20kW kusvika 40kW, (62840 kusvika 136480 Btu / h kana 17200 kusvika 34400 Kcal / h). Kana iri yekugadzirisa mweya yemakombi kana bhazi isingasviki 8.5m, ndapota tarisa kuSZG dzakateedzana.
SZQ Series, Economy, A / C ye9 kusvika 12.9 m bhazi, yakafanana kuyerera aluminium fin condenser
Kana iri yekugadzirisa mweya yemakombi kana bhazi isingasviki 8.5m, ndapota tarisa kuSZG dzakateedzana. Kana iwe unogona kutaura nesu pa sales@shsongz.cn kuti uwane rumwe ruzivo.
Technical Ratidziro yeBhazi A / C SZQ Series:
20 kW kana 68240 Btu / h
24 kW kana 81888 Btu / h
26 kW kana 88712 Btu / h
28 kW kana 95536 Btu / h
(Kamuri yeEvaporator 40 ° C / 45% RH / Kamuri yeCompenser 30 ° C)
22 kW kana 75064 Btu / h
30 kW kana 102360 Btu / h
Yakakurudzira Kureba Kwebhazi, Inoshanda kune China mamiriro ekunze）
Kuyerera Kwemhepo Vhoriyamu (Zero Pressure)
Condenser (Fan Zvakawanda)
Evaporator (Blower Yakawanda)
WDC-V / FD
33 kW kana 112596 Btu / h
35 kW kana 119420 Btu / h
37 kW kana 126244 Btu / h
36 kW kana 122832 Btu / h
38 kW kana 129656 Btu / h
40 kW kana 136480 Btu / h
SZQ-Ⅲ-D Ruzivo rwehunyanzvi SZQ-ⅢF-D Ruzivo rwehunyanzvi SZQ-Ⅳ-D Ruzivo rwehunyanzvi
SZQ-ⅣF-D Ruzivo rwehunyanzvi SZQ-Ⅵ-D Ruzivo rwehunyanzvi SZQ-ⅥF-D Ruzivo rwehunyanzvi
SZQ-VD Ruzivo rwehunyanzvi SZQ-VF-D Ruzivo rwehunyanzvi
1. Iyo sisitimu yese inosanganisira iyo yedenga unit, yemhepo yekudzoka grille, compressor, uye iyo yekuisa zvishongedzo, kwete kusanganisira compressor bracket, mabhandi, firiji.
2. Iyo firiji iri R134a.
3. Basa rekudziya rinosarudzika.
4. Compressor BOCK, VALEO kana AOKE inosarudzika.
5. Iyo fan & blower senge sarudzo senge brashe kana brashe.
Ndapota taura nesu pa sales@shsongz.cn kuti uwane zvimwe zvingasarudzwa uye ruzivo.
Yakatsanangurwa Yehunyanzvi Kuzivisa kweSZQ Series Bhazi Mhepo Inodzora
1. Chitarisiko Chakanaka
SZQ nhepfenyuro yemhepo inogadzirisa inotora dhizaini yakatetepa, ukobvu hwemhepo inodzora i188mm, inova yakaderera pane hukobvu hwazvino uno hwemhepo inodzora, inosangana nezvinodiwa nebhazi rekukwirira kudzora kwemhepo inoisa mweya. Uye zvakare, kutaridzika kwemugadziri wemhepo kwakagadzirirwa kugadziridzwa, zvinoenderana neazvino aesthetics uye ine chitarisiko chakanaka uye chine fashoni.
2. Chiedza chakareruka
Iyo condenser inoshandisa yakafanana kuyerera musimboti. Iyo condenser base yakagadzirirwa senge yakachinjika V-yakaumbwa furemu isina yepasi girafu chimiro. Iyo evaporator gungano remhepo dhayeti inotora inovandudza pasi gomba rakabatanidzwa rakakombama chimiro. Kuburikidza nenzira dziri pamusoro, huremu hwemhepo inodzora hwaderedzwa zvakanyanya.
Yakabatanidzwa Bending Air Duct
Parallel kuyerera musimboti uye V-furemu isina pasi goko chimiro
3. Inoshanda kupisa kupisa
Mukugadzirwa kwenzira yekuyerera kweiyo inoyerera kuyerera condenser, iyo yakanyanya tembiricha nzvimbo yemukati firiji inoenderana nenzvimbo yemhepo yekumberi yemhepo inomhanya. Iko kupisa kupisa kweiyo yepamusoro tembiricha mutsauko uye inonzwisisika dhizaini yeiyo urefu urefu inoshandiswa kudzikisira kuyerera kuramba. nokudaro kuwedzera kupisa kweiyo condenser uye kugona kuchinjisa kuitira kuti kuwedzere kushanda kweakaenzana kuyerera kupisa kupisa.
4. Kuchengetedzwa kwezvakatipoteredza
Zvichienzaniswa neyechinyakare chubhu-yekupedzisira condensers, iyo SZQ nhevedzano inoshandisa yakagadziriswa yakafanana kuyerera cores uye optimization yemhepo yekugadzirisa system pombi Izvi zvinobatsira kudzikisa mufriji mutero ne40%. Nekudaro ichideredza kukanganisa kwefriji leakage pane zvakatipoteredza.
Inverted V-yakaumbwa Furemu
Iyo SZQ Series Bhazi AC Mabasa Inosimudzira, Inesarudzo）
1. Defroster neMweya kutonhodza mukamuri raDriver
Iyo defroster, uye AC iri mutyairi kabhini inogona kuiswa maererano nezvinodiwa nevatengi, kupa mamiriro akasununguka kune mutyairi.
2. Yakabatanidzwa yepakati kudzora tekinoroji
Iko kusanganisa kwepaneru yekudzora uye chishandiso chemotokari chiri nyore kune iyo yepakati kurongedzwa kwekutonga kwemotokari. Iyo yekudzivirira yekudzivirira basa rechigadzirwa kudzora inowedzerwa kugonesa vatengi mashandiro manejimendi.
3. Plumbing uye kudziyisa tekinoroji
Iyo pombi yekupisa yemvura inogona kutungamirwa kunze kubva pakati peiyo evaporator kuti ione iyo yekupisa mashandiro emhepo inogadzirisa uye inosangana nezvinodiwa zveyakatonhora tembiricha mubhazi munzvimbo inotonhora.
4. Mhepo yekuchenesa tekinoroji
Inosanganisira kunyanya mabasa mana: electrostatic guruva muunganidzwa, ultraviolet mwenje, yakasimba ion jenareta, uye photocatalyst filtration, iyo inogona kuwana yakazara-nguva, isina kumisikidzwa anti-hutachiona uye sterilization, hwema kubviswa uye inoshanda guruva kubviswa, zvinobudirira ichivhara hutachiona hutachiona nzira.
5. Remote control yekuongorora tekinoroji
"Cloud kudzora" basa, ziva kure kudzora uye kuongororwa, uye nekuvandudza chigadzirwa sevhisi uye kugona kugona kuburikidza nekushandisa kukuru kwedata.
6. Energy Regulation Tekinoroji
Zvinoenderana nekupisa kuri mubhazi uye nharaunda, kuyerera kweiyo fan uye compressor kunochinjika mumatanho mazhinji kudzikamisa kutanga uye kumira kweiyo compressor, kugadzirisa nyaradzo yevatakurwi, uye kuona kuti sisitimu inoshanda zvakanyanya .
Iko Kushanda kweSZR Series Bhazi AC:
Nekuvandudzwa kwemusika uye nekuvandudzwa kwemararamiro ehupenyu, bhazi rakawedzera zvishoma nezvishoma kubva pachinyakare nzira dzekufambisa kuenda pakuteerera zvakanyanya kuvandudzwa kwenyaradzo uye nharaunda yekufambisa. Naizvozvo, vafambi vekumusoro-soro vanga vachiwedzera gore negore mumakore achangopfuura. SZR inotarisa pakuonekwa uye inokodzera mabhazi epamusoro- nepakati-renji. Maonero emusika akanaka.
1. Iyo yakawanda yekushandisa
Iyo yepasi arc yeSZR yakateedzana yakakodzera padenga arcs ine nharaunda ye6 ~ 72 metres, iyo upamhi upamhi i1860mm, uye nzvimbo yekubudisira mweya inodyiswa zvakananga mukati memakomba emhepo pamativi ese ebhasi, iri nyore kuisa . Iyo chigadzirwa chinoteedzana chine 8 mamodheru kubva kudiki kusvika kune hombe, uye iyo inotonhorera inokwana 20 ~ 40KW, inokodzera 8 ~ 13 metres mabhazi.
5. Energy Regulation Tekinoroji
Gadziridza kune yakasarudzika yedenga curvature
2.Kupfuma gadziriso Sarudzo
Iyo SZR nhepfenyuro yakapfuma mukugadziriswa kwemapoka akasiyana evashandisi, uye kune akawanda masisitimu evashandisi kusarudza.
Kumusoro-kumagumo kumisikidza: kunyanya kune yekumisikidza kumisikidza kwekufambisa kwevanhu uye emhando yepamusoro magumo evashanyi, mafeni uye zvimwe zvinhu
Kugadziriswa kwehupfumi: Inonyanya kuitirwa kumisikidzwa kwemabhazi ezvehupfumi, mabhazi evashanyi, mafeni uye zvimwe zvinhu.
3.Kushandisa Zviitiko zveBhazi Mhepo Inodzora SZR Series:
Ankai (JAC) 600 Bhazi rakaiswa pamwe neZIMZ mhepo inodzora paRiyadh (Saudi Arabia)
Ankai (JAC) 3,000 Bhazi rakaisirwa ne SONGZ air conditioner kuRiyadh (Saudi Arabia)
Foton chiuru Bhazi rakaisirwa neTIMZ mhepo inodzora paNaypyidaw (Myanmar)
Pashure: Air Conditioner yeBhazi, Murairidzi, Bhazi rechikoro uye Bhazi rakataurwa
Zvadaro: Bhazi Mhepo Inodzora yeDhivha Decker Bhazi
Mhepo Inodzora Yebhazi
air conditioner yekombi
Mota Mhepo Inodzora
kumashure-yakaiswa mhepo conditioner
Bhazi A / C.
Bhazi Mhepo Inodzora YeBiri Decker Bhazi
Kaviri Decker Bhazi A / C.
Kaviri Decker Bhazi Mhepo Inodzora
Air Conditioner yeBhazi, Kochi, Bhazi rechikoro uye ...